Mursal & Cabdi Xaashi oo diiday qorshaha looga reebay wejiga labaad ee shirka Dh/mareeb | SMC
Home WARARKA MAANTA Mursal & Cabdi Xaashi oo diiday qorshaha looga reebay wejiga labaad ee...
Mursal & Cabdi Xaashi oo diiday qorshaha looga reebay wejiga labaad ee shirka Dh/mareeb
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay maalmaha soo socda tegi doonaan Magaalada Dhuusamareeb uu ka furmayo Webiga labaad ee Shirka Madaxda DFS iyo kuwa Maamulada dalka.
Guddoomiye Maxamed Mursal iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa la tilmaamay inay qeyb ka yihiin Madaxda lagu Casuumay Webiga labaad ee Shirka Madaxda DFS iyo Maamul Goboleedyada, isla markaana labada dhinac ay aqbaleen Casuumaadii shirka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumadiisa ayaa maanta la filayaa inay gaaran Magaalada Dhuusamareeb, iyagoo halkaas tegi doona gelinka dambe ee Maanta, waxaana kahor mari doona wafdi hordhac u ah.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in Khamiista soo socota uu Madaxweyne Farmaajo safar ku tegi doono Dhuusamareeb, si uu uga qeyb galo Webiga labaad ee Shirka, kaasi oo looga hadli doono Arrimaha Doorashooyinka iyo Arrimo kale.
War-murtiyeedka kasoo baxay wajiga 1-aad ee Shirka Madaxda Dowlad Goboleedyada waxaa lagu dalbay in Madaxda heer Federaalka ay ku soo biiraan kulanka looga tashanayo doorashada dalka, Geedi socodka iyo habka loo marayo.
Previous articleKenya oo Xirtay laba tuhmane oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen weeraro argagixiso
Next articleBluebird Aviation plane goes down at Beledweyne airport